DMC-GX8K Mirrorless DSLM Camera - Panasonic
ယခင်ကမရှိခဲ့ဘူးသော ရုပ်ပုံ အရည်အသွေး
20.3-megapixel Sensor တစ်ခု၊ Dual I.S.နှင့် 4K ဗီဒီယို/ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးနိုင်မှုစွမ်းရည်တို့ဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော ဤကင်မရာသည် သင်ရိုက်ကူးလိုသောအရာများကို အကောင်းဆုံးသောပုံစံဖြင့် ရိုက်ကူးပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်း၏ ခေတ်မီဆန်းပြားသော ဒီဇိုင်းသည် ဝါရင့် ဓာတ်ပုံဆရာများကိုပင် စိတ်ကျေနပ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းညှိပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက် – Dual I.S.
လက်တုန်ခါမှုကို ပိုမိုအားကောင်းစွာ ထိန်းညှိပေးနိုင်ရန် LUMIX GX8 တွင် Dual I.S (Image Stabilizer) ကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ stabilizer နှစ်ခုလုံးကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်ရန် ကိုယ်ထည် I.S.နှင့် မှန်ဘီလူး I.S. တို့သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သော အဆုံး၌ အများဆုံး 3.5x အထိပိုကျယ်နိုင်သော ပြင်ဆင်ချက်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြင့် အလင်းရောင်အားနည်းသည့် အခြေအနေများတွင်ပင် လက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး ရှင်းလင်းသော ရိုက်ချက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
LUMIX G မှန်ဘီလူးများ၏ Wide Lineup
Panasonic LUMIX G DSLM (ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ်) ကင်မရာများတွင် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်နိုင်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးများစွာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အများစုသည် LUMIX GX8* တွင် Dual I.S (Image Stabilizer) နှင့် လိုက်ဖက်ညီညွတ်မှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင် Dual I.S. သို့မဟုတ် O.I.S နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုမရှိသော ပြောင်းလဲတပ်ဆင်နိုင်သော မှန်ဘီလူးများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
*မှန်ဘီလူးအချို့အတွက် Firmware update လုပ်ရန် လိုပါသည်။
LUMIX GX8 တွင် LUMIX G ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ၏ သမိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံး ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ရရှိနိုင်သည့် နောက်ဆုံး တီထွင်ဖန်တီးထားသော 20.3-megapixel Digital Live MOS Sensor ကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် မြန်နှုန်းမြင့် ရိုက်ချက်များ၊ အများဆုံး ISO25600 အထိ အာရုံခံနိုင်မှုမြင့်သော ရုပ်ပုံဖမ်းယူစနစ်နှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရွေ့လျားနှုန်းအတိုင်းအတာကို ရရှိထားပါသည်။
Digital Live MOS Sensor နှင့် Venus Engine တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက် အလင်းအားနည်းသော အခြေအနေများတွင်ပင် အစက်အပြောက်အနည်းဆုံးနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ရုပ်ပုံကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ရရှိနိုင်စေပါသည်။
နောက်ဆုံး တီထွင်ဖန်တီးထားသော Venus Engine
ထို Venus Engine တွင် အရောင်ထပ်ဆင့်ထုတ်ပေးနိုင်မှုနှင့် သဘာဝကျကျ အရောင်အသွေးများဖြင့် ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်မှု မြင့်မားသည့် ရုပ်ပုံများကို ရရှိရန် Multi Process Noise Reduction၊ Three Dimensional Colour Control နှင့် Aperture Filter တို့ တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ အာရုံခံမှုမြင့်မားသော MOS Sensor နှင့် Venus Engine တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရုပ်ပုံ အရည်အသွေးကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်းသည် သေးငယ်သော အလင်းဝင်ပေါက်ဖြင့် ရိုက်ကူးသည့် အခါတွင်ပင် ရုပ်ပုံများကို ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး ရှင်းလင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် အလင်းရောင်စဉ်ဖြာထွက်သည့်စနစ်ကို အထူးကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
LUMIX GX8 သည် အောက်ပါဆက်တင်များကို ချိန်ညှိရန် ရုပ်ပုံများကို RAW-format တွင် ရိုက်ကူးပြီး ၎င်းတို့အား ကင်မရာထဲတွင်ပင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Colour Space Setting (sRGB / AdobeRGB), White Balance, Exposure Compensation, Photo Style, Intelligent D-range Control, Contrast, Highlight / Shadow, Saturation, Noise Reduction, Intelligent Resolution, Sharpness။
4K Video နှင့် 4K Photo —
ပြီးပြည့်စုံသော အမှတ်ရဖွယ် အခိုက်အတန့်ကို ဖမ်းယူရိုက်ကူးလိုက်ပါ
သင်အမှတ်ရလိုသည့် အထူးအခိုက်အတန့်လေးများသည် အချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အရည်အသွေးဖြင့် ဖမ်းယူရိုက်ကူးထားသင့်ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် Panasonic ၏ 4K နည်းပညာကို လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ LUMIX GX8 အသစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည် ဗီဒီယိုကို 4K ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ (QFHD: 3840 x 2160 pixels, 25 fps, 100Mbit/s အထိ)။
ထို့အပြင် 4K Photo လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် သင်သည် ကင်မရာတွင် 4K ဗီဒီယို (တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိန်/ဓာတ်ပုံ ၃၀) စီးရီးထဲမှ ပြီးပြည့်စုံသော ဓာတ်ပုံများကို လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ပြီး ၎င်းကို 8-megapixel ရှိသော ရုပ်ပုံအဖြစ် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
hybrid LUMIX GX8 ကြောင့် ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများကို လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
4K Photo Modes — လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးလိုက်ပါ
ထို 4K Photo လုပ်ဆောင်ချက်ကို မတူညီသည့် mode သုံးခုတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး တစ်စက္ကန့်လျှင် ဖရိန်/ဓာတ်ပုံ ၃၀ နှုန်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော အခိုက်အတန့်လေးများကို ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
ဓာတ်ပုံများစွာကို ရိုက်ကူးသည့် mode ကို အသုံးပြုသကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကင်မရာသည်ှShutter ခလုတ်ကို နှိပ်ထားသ၍ အမြင့်မားဆုံးသော ရိုက်ကူးမှုနှုန်းဖြင့် 8-megapixel ရှိသော ဓာတ်ပုံများကို ဆက်လက်ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် နောက်ပိုင်းတွင် မည်သည့် ဖရိန်/ဓာတ်ပုံကိုမဆို 8-megapixel ရှိသောပုံအဖြစ် ထုတ်ယူနိုင်သည့် 4K ဗီဒီယိုကို ရိုက်ကူးနိုင်စေမည့် အဆင့်မြင့် 4K Photo လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရှိလာမည့် အမှတ်တရများကို အေးအေးဆေးဆေးဖြင့် စောင့်မျှော်လိုက်ပါ။
4K Pre-Burst" mode ၏ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်မှာ Shutter ခလုတ်ကို မနှိပ်မီတစ်စက္ကန့်အလိုနှင့် နှိပ်ပြီး တစ်စက္ကန့်ကြာသည်အထိ 4K ဗီဒီယိုစီးရီးကို စတင်ရိုက်ကူးပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင် တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ထက် ပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်သော ထင်မှတ်မထားသော အမှတ်တရများအား ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၆၀ ကိုရရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အကောင်းဆုံးကို ရယူနိုင်ပါသည်။
• ဗီဒီယိုများကို 4K တွင် ရိုက်ကူးသော အခါ၊ UHS-IS Speed Class3အဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ကတ်ကို အသုံးပြုပါ
2,360k-dot၊ ကြီးမားသော OLED LVF
LUMIX GX8 တွင် မြင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့် ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်သော (2,360k-dot) Tiltable OLED Live View Finder ပါရှိပြီး ယင်းက နေရောင် တိုက်ရိုက်ထိုးနေသော အခြေအနေများတွင်ပင် ပြီးပြည့်စုံစွာ ရိုက်ကူးပေးပြီး 10,000:1 အလင်းအမှောင်ပြတ်သားစေနိုင်သည့် အစွမ်းကို ရရှိစေပါသည်။ ရုပ်ပုံချဲ့နိုင်စွမ်း 0.77x ရှိသည့်အတွက် (35mm ကင်မရာနှင့် ညီမျှသည်) ရုပ်ပုံအသေးစိတ်များကို ကြည့်ရှုရာတွင် လွယ်ကူစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဆက်တင်အားလုံးကို သင့်မျက်စိရှေ့တွင်ပြသထားသည့်အတွက် သင်အလိုရှိသည့်အတိုင်း ရုပ်ပုံများ ထွက်ပေါ်စေရန် ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
ရေစို/ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော အကြမ်းခံ ဒီဇိုင်း
အလွန်လေးလံသည့် ဒဏ်ကို ခံနိုင်စေရန်အတွက် LUMIX GX8 ကို အရှေ့နှင့်အနောက်ဘောင်တွင် မဂ္ဂနီဆီယမ် သတ္တုစပ်အပြည့်ဖြင့် အဓိက ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၊ ဒိုင်ခွက်နှင့် ခလုတ်တိုင်းတွင် ရေနှင့် ဖုန်မဝင်စေရန် အလုံပိတ်ထားသည့်အတွက် ရေဝင်ခြင်း/ဖုန်ဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ထို 1040k-dot အနောက်ဘက်ခြမ်း မော်နီတာတွင် ပို၍ တိကျစွာ ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိပြီး ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ရန်အတွက် OLED ကို အသုံးပြုထားသည်။ LUMIX GX8 သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ရှုထောင့်များကို ရှာဖွေရန် သင့်အားလွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး ထောင်လိုက်ရိုက်ကူးမှုများအတွက်ပင် ပို၍သက်တောင့်သက်သာရိုက်ကူးနိုင်စေရန် ပြုလုပ်ပေးသည့် တိမ်းစောင်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှု လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် touch ထိန်းချုပ်စနစ်ပါသည့်အတွက် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တစ်ချက်ထိရုံဖြင့် သင်ရိုက်ကူးလိုသည့် အရာကို ချိန်နိုင်ပြီး Shutterကိုပင် အသုံးပြုရန် မလိုတော့ပါ။
LUMIX GX8 သည် ကိုယ်ထည်ပါးရုံသာမက ပို၍သေသပ်လှပသော အသွင်သစ်တစ်ခုကိုပါ ပုံဖော်ပေးထားသည့်အတွက် ၎င်းသည် အလိုလျောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော အဆင့်တစ်ခုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အရှေ့/အနောက် ဒိုင်ခွက်များသည် ယာယီ WB နှင့် ISO ချိန်ညှိမှုများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူစွာ အကူးအပြောင်းလုပ်နိုင်ပြီး အဓိက အလင်းဝင်ပေါက်နှင့် Shutter အမြန်နှုန်းဆက်တင်များကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ Setting များကို လုပ်ဆောင်ချက် ၈ ခု ခလုတ်များအတွက် ခွဲဝေသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။* ထို့အပြင် သတ်မှတ်ထားသောဒိုင်ခွက်ဖြင့် အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှုကို ထိန်းညှိနိုင်ပါသည်။
*ကိုယ်ထည်ပေါ်မှ ခလုတ် ၈ ခုနှင့် မီနူးပေါ်မှ ခလုတ် ငါးခု
ပို၍ ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်စေရန် LUMIX GX8 ကို DMW-FL580L / FL360L ပြင်ပ ဖလက်ရ်ှမီး၊ DMW-MS1 Stereo Microphone နှင့် အခြား အပိုပစ္စည်းများတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤမြင်ကွင်းရှာဖွေကိရိယာအတွက်၊ ဆန့်နိုင်ကျုံ့နိုင်သော သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် Eyecup DMW-EC3 သည် မျက်မှန်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ မျက်မှန်မပါဘဲဖြစ်စေ ကြည့်ရှုရာတွင် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။
Panasonic ၏ Depth From Defocus (DFD) Auto Focus (AF) နည်းပညာ၏ ကျေးဇူးကြောင့် အလျင်မြန်ဆုံး ရွေ့လျားနေသော လှုပ်ရှားမှုကိုပင် ရိုက်ယူလိုက်ပါ*။ LUMIX GX8 တွင် ဤအသစ်စက်စက် နည်းပညာကို အသုံးပြုထာပြီး ဖရိန်အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများအကြား အကွာအဝေးကို ဆက်တိုက်တွက်ချက်ပေးကာ အလွန်မြန်ဆန်ပြီး ဆက်တိုက်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့် မှန်ဘီလူးများ၏ ဖိုးကပ်စ်ကို ရွေ့လျားစေသည်။ ဤစနစ်သစ်သည် 0.07 စက္ကန့်အထိ** မြန်သော AF နှုန်းများကို ဖြစ်စေသည့်အပြင် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆ ဖရိန်နှုန်းရိုက်ကူးပေးသော Continuous Auto Focus်(AFC) ဖြင့် ဆက်တိုက် အများအပြားရိုက်ကူးသည့်နှုန်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရာတွင်လည်း ဆက်တိုက်ဖိုးကပ်စ်ချိန်သည့် တည်ငြိမ်စွမ်းကိုလည်း ၎င်းက တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
** AFS တွင်၊ H-FS14140 သို့မဟုတ် H-HS12035 (CIPA) ပါသော ကျယ်ပြန့်သော အဆုံးတစ်ဖက်၌။
AF ခြေရာခံစနစ်၏ အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်နည်းအသစ်ကိုအသုံးပြုကာ ရိုက်ကူးလိုသည့်အရာဝတ္ထု၏ အရောင်၊ အရွယ်အစားနှင့် လှုပ်ရှားမှု လားရာကိုညွှန်ပြသည့် ပမာဏကိုပါ မှတ်သားပေးပြီး ထိုအရာဝတ္ထုပေါ်တွင် ချိန်ဆထားမှုအား မလှုပ်ရှားအောင် ကင်မရာက ပို၍ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Low Light Auto Focus စနစ်ကြောင့် အခြားမည်သည့် အလင်းရောင်မျှ မရရှိသည့် လရောင်အောက်က -4EV အခြေအနေမျိုးတွင် အရာဝတ္ထုများကို ပို၍ တိကျစွာ ဖိုးကပ်စ်ချိန်နိုင်စေပါသည်။
ထို့ပြင် LUMIX GX8 သည် Starlight AF ဖြင့် အသစ်ထပ်မံ ပေါင်းစပ်ထားပြီး ပိုမိုသေးငယ်သော AF ဇုန်ထဲတွင် အလင်းအမှောင်ပြတ်သားမှု တန်ဖိုးကို မှန်ကန်တိကျစွာ တွက်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် ညဘက်ကောင်းကင်ယံရှိ ကြယ်များကို အော်တိုဖိုးကပ်စ်ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
အများဆုံး 1/8000 စက္ကန့်နှုန်းဖြင့် အလွန်မြန်သော ရှတ္တာနှုန်း
အများဆုံး 1/8000 စက္ကန့်နှုန်းဖြင့် ရိုက်ကူပေးသော Shutter နှုန်းသည် လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္တုအား လျှပ်တပြက်ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ပြင်ပရိုက်ကူးမှုများတွင်လည်း ဖွင့်နိုင်စေပါသည်။ အများဆုံး 1/16000 စက္ကန့်နှုန်းဖြင့် အီလက်ထရောနစ် Shutter သည် ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်အောက်တွင် အရောင်များဖြူနေခြင်းကို လျှော့ချပေးပါသည်။
အနုပညာ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခု၌ ဖြစ်စေ၊ လမ်းမပေါ်တွင် ရိုက်ကူးသည့်အခါဖြစ်စေ သင့်ကင်မရာကို အသံလုံးဝ ပိတ်ထားရမည့် အခြေအနေများစွာ ရှိပါသည်။ LUMIX G ကင်မရာများ၏ အီလက်ထရောနစ် Shutter ခလုတ်ကို အသုံးပြုသောအခါ မှန်ဘီလူးများထဲရှိ လျှင်မြန်ပြီး အသံတိတ် AF စနစ်နှင့် Shutter ဆူညံမှု မရှိသည့်စနစ်၏ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် မှန်လွတ်စနစ်သည် ဆူညံသံကင်းမဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ LUMIX G ပါသော အသံတိတ်ရိုက်ကူးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားဓာတ်ပုံပညာရှင်များ လက်လှမ်းမမီနိုင်သော နေရာများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
1/250 စက္ကန့်နှုန်းဖြင့် အံကိုက်ချိန်ညှိလှုပ်ရှားသည့် မြန်နှုန်း
အလင်းထွက်သည့် အရာတစ်ခုကို ဆန့်ကျင်၍ ရိုက်ကူးရာတွင် ဖလက်ရ်ှမီးသုံးခြင်းသည် အလွန် အသုံးဝင်ပါသည်။ အများဆုံး 1/250 စက္ကန့်နှုန်းဖြင့် အံကိုက်ချိန်ညှိလှုပ်ရှားသည့် မြန်နှုန်းက အလင်းတောက်ပသော ရှုခင်းများတွင်ပင် အပြည့်အဝဖွင့်ထားပေးသော aperture ကို အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။
Panasonic LUMIX DMC-GX8 ကို မိတ်ဆက်ခြင်း - ဒစ်ဂျစ်တယ် မှန်ဘီလူးတစ်ခုပါ မှန်လွတ်ကင်မရာ
Daniel Berehulak ပြုလုပ်ဖန်တီးသည့် Panasonic LUMIX GX8 Shooting Impression
"Dual I.S." ကို မိတ်ဆက်ခြင်း - ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော Image Stabilizer
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. (H-X015)
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (H-X025)
မှန်ဘီလူးများ- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. (H-NS043)
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G VARIO 7-14mm / F4.0 ASPH. (H-F007014)
မှန်ဘီလူးများ- LUMIX G X VARIO 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. (H-HS35100)
Daniel Berehulak ဖန်တီးထားသော 4K ဖြင့် Panasonic LUMIX GX8 "Rhythm REVOLUTION"
Lenses Filters / Mount Adaptors Flashes / Microphones Battery အခြား